Accueil > Gazetin'ny nosy > Fiainam-pirenena : Manomboka ny asa fampihorohoroana
Fiainam-pirenena : Manomboka ny asa fampihorohoroana
Asan-dahalo, fanaovana takalon’aina na « kidnapping » an-tanàn-dehibe sy ambanivohitra, fandoroana trano sy fanafihana mitam-piadiana mahery vaika, ireo rehetra ireo no azo lazaina ny fiainan’ny Malagasy ankehitriny. Tsy misy hafa amin’ny zava-mitranga any Afrika afovoany toa ny Centre Afrique, Mali sy Soudan, ny zava-misy ankehitriny. Toa izao zavatra iainana ankehitriny izao no nitranga tany Rwanda talohan’ny ady nifamonoana faobe tao amin’ity firenena ity ny taona 90 iny. Miparitaka izay tsy izy ny basy marovava eran’ny Nosy ary tsy hay tenenina intsony ny basy vita gasy fa saika manana azy avokoa ny isan-tokan-trano amin’ny mponina any ambanivohitra amin’ny toerana misy fanafihana matetika. Tsy manaitra ny olona intsony ny fahitana faty olona etsy sy eroa izay vokatra ny famonoana azy ireny. Efa toa ny mahazatra ny sakan-dàlana amin’ny làlam-pirenena maro eto Madagasikara.
Manomboka tsy matahotra fahafatesana intsony ny vahoaka Malagasy ankehitriny. Maro ny mamono olona toa ny mamono akoho ankehitriny ary mampiasa habibiana amin’ny mpiara-belona aminy. Toa ifaninanana aza ny fifanafihana ataon’ny tanàna iray amin’ny tanàna hafa manodidina azy. Hatramin’ny fandorana olona velona ao an-tranony no efa iainan’ny mponina any ambanivohitra amin’izao fotoana izao. Miparitaka izay tsy izy koa ny basy vita sinoa ary saika mandrakotra toerana maro. Mihantsy ny mpitandro filaminana ny dahalo ankehitriny.
Endrika hafa koa amin’ny haratsian’ny fiaraha-monina ny momba ny kolikoly avo lenta ataon’ny mpanao pôlitika ankehitriny. Toa izany koa ny fanodinkodinana ny volam-panjakana sy ny fisian’ny tsy maty manota. Mahazo vahana ny fanaovana ratsy, ary tsy mahasahana ny asany intsony ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana. Goragora tanteraka ny fampiharana lalàna ka ny figadrana dia natao ho an’ny olona osa sy tsy manam-bola. Malemy tanteraka ny fanjakana ka tsy mety mihaino azy intsony ny vahoakany. Tsy afaka niaro ny vahoaka sy ny fananany ny fanjakana nifandimby teto, fa indrindra tao anatin’ny 20 taona farany teo izao.
Raha mandeha any ambanivohitra isika dia efa toa ny tany tsy misy fanjakana intsony manerana ny toerana maro. Ny dahalo sy ny jiolahy no manjaka. Tena fanjakan’i Baroa tanteraka no mitranga. Izay matanjaka no manao lalàna ka malemy tanteraka eo anatrehany ireo ny mpitandro filaminana. Maro koa aza no manao dahalo sy mangalatra izy ireny.
Efa miaina ao anatin’ny fampihorohoroana tanteraka ny Malagasy ankehitriny. Fahantrana tsy roa aman-tany no iainan’ny 98% ny Malagasy. Ny fitomboan’ny antokom-pinoana dia isan’ny endrika iray fandrefesana ny fahasimban’ny fiaraha-monina sy ny fahadisoam-panantenana. Mivarilavo ny olona ka maro ny mpangataka sy ny olona mivelona eny amoron-dàlana.
Mampanahy mafy ny fiainan’ny Malagasy satria efa tonga eto koa ireo “Mafia” iraisam-pirenena maro izay mandrotika. Hatramin’ny rongony mahery vaika avy Colombie. Ny vola no ampitenenin’izy ireny ary ny mpanao pôlitika no ataon’izy ireo fitaovana amin’izany ankehitriny. Saritsarin-dalàna tsy ahazoana miasa ara-dalàna no omena ny Bianco (Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly) sy ny Samifin sy ny sampan-draharaha miady amin’ny famotsiam-bola sy ny fampihorohoroana.
Fotoana tokony hieritreretana mafy izao zava-doza mahazo azy izao ny Malagasy. Very tanteraka ny fahendrena napetraka ny Ntaolo. Very hasina ny firenena. Potika ny fiainan’ny Malagasy manontolo ankehitriny ary mananontanona azy ny ady an-trano sy ny asa fampihorohoroana mahery vaika.